Efa Mahazo Mampiaraka ve Aho? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goun Grika Groenlandey Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kabuverdianu Kazakh Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Mongol Myama Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tiorka Tiv Tseky Tsonga Twi Télougou Umbundu Urhobo Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Inona no atao hoe mampiaraka?
Nahoana no mampiaraka?
Efa ampy taona hampiaraka ve aho?
Nahoana no mila miandry?
Miaraka foana ianao sy ny ankizilahy iray na ankizivavy iray. Mampiaraka ve izany aminao?
Misy ankizilahy na ankizivavy tianao. Izy koa tia anao. Mifandefa hafatra na mifampiantso an-telefaonina imbetsaka ianareo isan’andro. Mampiaraka ve izany aminao?
Isaky ny tafaraka amin’ny namanao maromaro ianao, dia ankizilahy iray na ankizivavy iray foana no iresahanao. Mampiaraka ve izany aminao?
Azo inoana fa tsy sarotra taminao ny namaly an’ilay fanontaniana voalohany. Mety ho nisalasala kely anefa ianao talohan’ny namaliana ny ambiny. Fa inona tokoa moa no atao hoe mampiaraka?
Ny tiantsika horesahina dia hoe: Manao zavatra imbetsaka miaraka amin’ny ankizilahy na ankizivavy iray tianao ianao, ary izy koa tia anao.
Eny daholo àry no valin’ireo fanontaniana telo ireo. Efa mampiaraka ianareo raha mifaneho fitiavana sy mifampiresaka matetika. Marina foana izany na miresaka an-telefaonina fotsiny ianareo na mihaona mihitsy, ary na miafina na tsia.
Inona no tokony ho tanjona rehefa mampiaraka? Natao hanampiana ny tovolahy iray sy ny tovovavy iray hamantatra izy io raha afaka ny hivady izy ireo na tsia.
Marina fa heverin’ny tanora sasany hoe kilalao ny mampiaraka. Mahafinaritra azy fotsiny ny miaraka amin’ny ankizilahy na ankizivavy, fa tsy mieritreritra ny hanambady izy. Misy aza te hampideradera fotsiny hoe azony ny ankizilahy na ny ankizivavy niriny. Ny hafa indray te hisongadina.
Tsy tena tia an’ilay olona iarahany anefa ny tanora toy izany, ka matetika no tsy maharitra ilay fifandraisana. Hoy i Anja: “Herinandro na tapa-bolana dia misaraka ny tanora maro mampiaraka. Mieritreritra ry zareo fa tsy natao haharitra ny fiarahan’olon-droa. Toy ny hoe miomana ho amin’ny fisaraham-panambadiana izy, fa tsy ho amin’ny fanambadiana.”
Tena misy vokany eo amin’ny olona iarahanao izay ataonao. Mitandrema àry sao milalao fitia.—Lioka 6:31.
Raha mampiaraka ianao nefa tsy vonona hanambady, dia toy ny ankizy mahazo kilalao. Lalaoviny vetivety ilay izy dia ariany
Tianao ve raha hataon’ny olona toy ny kilalao fotsiny ny fitiavanao? Lalaovin’ny ankizy vetivety fotsiny ny kilalao omena azy, ary ariany avy eo. Raha tsy tianao izany, dia aza atao toy ny kilalao koa ny fitiavan’ny hafa. Milaza ny Baiboly fa ny fitiavana “tsy manao izay tsy mahamendrika.”—1 Korintianina 13:4, 5.
Hoy i Fitia: “Mieritreritra aho indraindray hoe fialam-boly mahafinaritra fotsiny izany mampiaraka izany. Tsy mahafinaritra mihitsy anefa ilay izy, rehefa milalao fotsiny ny anankiray nefa ny iray tena tia.”
Soso-kevitra: Mieritreritra ny hiaraka amin’olona iray sy hanambady azy ve ianao? Vakio ny 2 Petera 1:5-7. Mifidiana toetra iray ao, ary miezaha hanana izany. Rehefa afaka iray volana, dia diniho hoe nahoana no tena nilainao ilay toetra. Jereo koa hoe inona no ezaka efa vitanao mba hananana azy io.
Firy taona ny tanora vao afaka mampiaraka, araka ny hevitrao?
Apetraho amin’ny ray aman-dreninao io fanontaniana io.
Mety tsy hitovy ny valin-teninao sy ny an’ny ray aman-dreninao. Mety hitovy koa anefa izany. Angamba ianao anisan’ireo tanora tsy maika ny hampiaraka, fa miandry ho lehibe kokoa mba hahafantarana tsara ny tenany.
Izany no nataon’i Danielle, 17 taona. Hoy izy: “Raha nitady vady aho tamin’ny roa taona, dia tsy ho nitovy mihitsy tamin’ny ankizilahy tiako tamin’izany ny tiako amin’izao. Ary na hatramin’izao aza, dia mbola tsy haiko tsara hoe hoatran’ny ahoana ny vady tiako. Hiandry kely aho, ka rehefa hitako hoe tsy miovaova intsony aho vao hieritreritra ny hampiaraka.”
Misy antony hafa koa mahatsara ny miandry. Misy teny hoe “fotoana fivelaran’ny fahatanorana”, ao amin’ny Baiboly. Manomboka maniry mafy hitia olona sy hanao firaisana ny tanora, amin’io fotoana io. (1 Korintianina 7:36) Raha mifankazatra be amin’ny ankizilahy na ankizivavy iray ianao amin’izay, dia hihamafy ny fanirianao, ka mety ho resin’ny fakam-panahy haloto fitondran-tena ianao.
Marina fa tsy mampaninona ny tanora sasany izany. Maro angamba no maika hanandrana hoe hoatran’ny ahoana izany manao firaisana izany. Aza manahaka azy ireo anefa! (Romanina 12:2) Mampirisika anao ‘handositra ny fijangajangana’ mantsy ny Baiboly. (1 Korintianina 6:18) ‘Hanalavitra ny nofonao ny loza’, raha avelanao ho tapitra ny “fotoana fivelaran’ny fahatanorana” vao mampiaraka ianao.—Mpitoriteny 11:10.
Mahita ny ataon’ny ankizy ianao indraindray na teren’ny namanao, ka te hampiaraka nefa mbola tsy vonona. Toy ny mpianatra vao manomboka taom-pianarana ianao, nefa terena hanala fanadinana sahady. Tsy rariny izany! Mila fotoana ianarana lesona ianao, mba ho voavalinao tsara ireo fanontaniana any amin’ilay fanadinana.
Toy ny fanadinana ny mampiaraka.
Tsy kilalao izy io. Alohan’ny hiarahanao amin’ny olona iray àry, dia mila fotoana ianarana “lesona” iray tena lehibe ianao. Inona izany? Ny fomba ifandraisana tsara amin’ny namana.
Ho hainao kokoa any aoriana any ny hampaharitra ny fifandraisanao amin’izay olona hitanao fa mety aminao. Maharitra mantsy ny tokantrano, rehefa mpinamana be ny mpivady.
Aza mihevitra hoe voateritery ny fiainanao, raha miandry kely ianao vao mampiaraka. Hahasoa anao kosa izany, satria ho afaka hankafy kokoa ny fahatanoranao ianao. (Mpitoriteny 11:9) Hanam-potoana hanatsarana ny toetranao ianao, ary indrindra ny fifandraisanao amin’i Jehovah.—Fitomaniana 3:27.
Afaka mifanerasera amin’ny ankizilahy na ankizivavy ihany anefa ianao. Rehefa manao fety, ohatra, dia miaraha maromaro ary manasà ankizilahy sy ankizivavy. Tokony hisy olon-dehibe hanara-maso anareo. Hoy i Anita: “Mahafinaritra kokoa rehefa maromaro no miaraka. Tsara kokoa ny mana-namana be dia be.” Hoy koa i Vony: “Tena tsara ilay miaraka maromaro, satria lasa mahafantatra olona samihafa toetra ianao.”
Harary fo kosa ianao, raha mampiaraka avy hatrany, na dia mbola tsy tokony hanao izany aza. Aza maika àry. Ampiasao kosa ny fahatanoranao, mba hianarana ny fomba hifandraisana amin’ny olona sy hampaharitra izany. Ho fantatrao tsara amin’izay ny tenanao sy ny karazana vady tadiavinao, ka ho vonona tsara ianao rehefa tapa-kevitra ny hampiaraka.
Ahoana no hahafantaranao ny tena toetran’ilay olon-tianao?
Inona no Atao hoe Tena Fitiavana?
Olona Hoatran’ny Ahoana re no mba Hataoko Modely e?